E-sports ဇာတ်လမ်း ၆ တွဲအတွက် Douban မှ Rating အဆင့်ရလဒ်များ (Top 1-6) | Asia News Bar
E-sports ဇာတ်လမ်း ၆ တွဲအတွက် Douban မှ Rating အဆင့်ရလဒ်များ (Top 1-6)
Douban မှာတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးခွဲကာ မဲပေးလို့ရပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သစ်မှုအရ အဆင့်ရလဒ်တွေထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ E-sports အကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၆ ခုအတွက် ကြည့်ရှုသူတွေက အပြိုင်အဆိုင်မဲပေးခဲ့ကြပြီ။ Rating သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့် Top 1-6 စာရင်းက ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
6. Falling into your smile
လက်ရှိပြသနေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး Xu Kai နဲ့ Cheng Xiao တို့ အဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားပေမဲ့ ပရိသတ်တွေက သိပ်ပြီးအကြိုက်မတွေ့ခဲ့တာကြောင့် Rating 2.9 သာရရှိခဲ့ပြီး အဆင့် ၆ နေရာကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။
၂၀၁၉ တုန်းက ပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Yang Zi နဲ့ Li Xian တို့က အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆင့် ၅ နေရာကို Rating 6.6 ဖြင့်ရပ်တည်နေပါတယ်။
၂၀၁၆ ကတည်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Yang Yang နဲ့ Zheng Shuang တို့ရဲ့ Love O2O ဇာတ်လမ်းကတော့ ကြည့်ဖူးသူတိုင်း စွဲလန်းရတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ အဆင့် ၄ နေရာကို Rating 7.0 နဲ့ ရရှိထားတဲ့ E-sports ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Rating 7.4 အထိရရှိခဲ့ပြီး အဆင့် ၃ နေရာကို ရပ်တည်ထားနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ The King’s Avatar ပါပဲ။ ၂၀၁၉ တုန်းကထွက်ခဲ့ပြီး Yang Yang နဲ့ Maggie Jiang တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
2. Grank your Heart
Wang Yibo နဲ့ Wang Zi Xuan တို့ရဲ့ E-sports ဇာတ်လမ်းလေး Grank your Heart ကတော့ ၂၀၁၉ ကတည်းကထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုအချိန်ထိနာမည်ကြီးနေဆဲပါပဲ။ Rating 7.7 အထိ ရရှိကာ အဆင့် ၂ နေရာကို ရယူထားပါတယ်။
အဆင့် ၁ နေရာကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ Luhan, Wu Lei, Cecilia Boey နဲ့ Dai Lu Wa တို့ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Crossfire ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ Rating 8.0 အထိရရှိကာ စာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Next Disney မင်းသမီးလေး (10) ယောက်ရဲ့ လူ version လို့တောင် ထင်မှတ်မှားရမဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Rosé »
Previous « ချွင်းချက်အ​နေနဲ့ စစ်မှုထမ်းတာဝန်က​နေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမင်းသား ၄ ဦး
Gong Jun နဲ့ Zhang Huiwen ကို ဝေဝေဆာဆာချီးကျူးခဲ့တဲ့ “The Flaming Heart” ရဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး
ခေါင်းစည်းကြိုးလေးတစ်ကွင်းတောင်မှ စျေးတော်တော်မြင့်တာကိုမှသုံးစွဲတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး Yang Mi
Ro မှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် မကြာခင်မှာ ပြသတော့မဲ့ တရုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ကား
ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Zhao Liying နဲ့ Yang Mi တို့ရဲ့ တူညီမှု ၈ ခု
ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နေ့ရက်တိုင်းကို ပိုမိုလှပပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ Zhao Liying
Luo Yun Xi နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက် (၅) ချက်